48 Inch bathroom vanity with vessel sink Antique Style The superb carving on the surface of the cabinet, the combination of square and round, harmonious and smooth texture, high-end perfect appearance, extremely beautiful and infectious. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, no…
OkasaLife antique style bathroom vanity Antique Style The tenon joint process is adopted, and the polished tenon joint makes the cabinet stronger and more durable, and the service life is longer. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed…
48 Inch freestanding vanity unit Antique Style The cabinet is made of imported American red oak, with excellent wood, green environmental protection, zero emissions, moisture-proof and anti-corrosion. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed by the top Italian…
Antique style bathroom vanity tops Antique Style Professional engravers carve carefully to make the lines more prominent, smoother, mature and high-quality, and overall more textured. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, ထိပ်အီတလီအီတလီဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်း，The…
Small bathroom vanity with oval mirror Antique Style The overall design is elliptical, small design, no space, convenient and practical, harmonious and smooth texture, perfect distinguished appearance. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed by the top Italian…
48 Inch Antique style bathroom vanity Antique Style The cabinet is made of imported American red oak, green and environmentally friendly, zero emissions, good wood quality, moisture-proof and anti-corrosion. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed by the…
Antique style wooden bathroom vanity Antique Style High-end luxurious cabinet design and superb carving technology createavisual enjoyment and can decorate any bathroom. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, ထိပ်အီတလီအီတလီဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်း，The design…
OkasaLife small sink vanity Antique Style Oval mirror design, high-end and beautiful, with the cabinet exquisite carved, creatingavisual feast. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, ထိပ်အီတလီအီတလီဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်း，The design concept continues to…
Antique style bathroom basin cabinet Antique Style The cabinet body adopts the tenon joint process, the polished tenon joint makes the cabinet stronger and more durable, and the service life is longer. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ,…
42 inch rustic bathroom vanity Antique Style Simple and bright lines, the blend of square and circle, harmonious and smooth texture, perfect and distinguished appearance, very beautiful and infectious. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed by the top…
Antique style bathroom vanity with mirror Antique Style Professional engraver carefully carved to make the lines more prominent, smoother, mature and high quality, the overall texture. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed by the top Italian original…
48 inch wood bathroom vanity Antique Style The Antique Style, with exquisite hand-carved carvings, touching the exquisite luxury that can be perceived, bringsavisual impact to the space in your bathroom. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ,…
Antique style bathroom sink and cabinet Antique Style The mirror is specially designed withapallet, which is convenient for placing more cosmetics, and is equipped with an enlarged and deepened drawer,high usage. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, no pollution and…
Solid wood bathroom sink vanity unit Antique Style Professional engravers carefully crafted to make the lines more prominent, smoother, mature and noble, more overall texture, touch the perceivable luxury All products of OKASA bathroom cabinets are made of environmentally friendly materials, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed by the…
OkasaLife 48 inch basin cabinet Antique Style Simple and bright lines, the combination of squares and circles,aharmonious and smooth texture,aperfect and noble appearance, are extremely beautiful and infectious. OKASA ရေချိုးခန်းဗီရို၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှုနှင့်အနံ့မရှိ, designed…
Double vanities rustic bathroom vanity Easy to use / A versatile Floor-standing delicate carved cabinet, double basin design, anti-fog large bath mirror, easy to use，A versatile, contemporary Antique style for the most discerning of customers. အာမခံချက်: 5-Year Limited Warranty Brand Name： Okasa Style: Antique style Installation Type： Floor-standing Cabinet material： American…